गोंगबु हत्याकाण्ड: आमा छोरी नै ताकेपछि अकल्पनीय अन्त्य ! - Lekbesi Khabar
काठमाडौँ: केटोलाई आमाले नपुगेर लुकिछिपी छोरी ताक्ने, आमाचाहिँ ट्याक्सी चढेर डुलिरहने ! ५० लाखको हिसाब पनि छोरीसँगको सम्बन्धका नाममा तिर्न नखोज्ने भएपछि मान्छे काटेर फ्याँक्ने ! टोखा– १०, गोंगबुस्थित नवज्योति मार्गको विभत्स हत्याकाण्डको मूल कारण हो यो ।
शनिबार राति कृष्णबहादुरलाई काटकुट गरी आइतबार बिहानै झोलामा हालेर फ्याँकेपछि एम्बुलेन्स लिएर चालक उनीहरू बस्ने टोलमै पुगेका थिए । यो समाचार आजको जनआस्थामा प्रकाशित छ ।
२८ श्रावण २०७७, बुधबार १७:४७ August 13, 2020